China Cold Sameeyay U Steel Sheet Pile ee warshadda mashruuca iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Qabow samaysmay U nooca xaashida birta ee tuulan nidaamka 'billet billet' waa la kululeeyaa oo la duubaa si la mid ah sida raso xaashida kulul, laakiin halkii loo qaabayn lahaa qaybaha U-tuulista xaashida iyadoo kulul, gariiradaha ayaa loo daayaa inay qaboojiso.Gariiradaha kulul ee duuban ayaa markaa la dhex maraa mishiinka waxaana lagu qaabeeyaa heerkulka qolka oo noqda qaabka U dambeeya ee ugu dambeeya.
4) Nooca: u nooca xaashida qashinka
Qaar ka mid ah qaboojiyaha sameeyay cabbirka xaashida birta ee U
1) Baaxadda qaybta waa weyn tahay, taas oo hubinaysa in sifooyinka farsamada ee qaybta si buuxda loo isticmaalo.
2) Qaabdhismeedku waa mid siman oo sahlan in dib loo isticmaalo.
3) Naqshadeynta qaab dhismeedka qaybaha alaabadu waa macquul waxayna leedahay "wax tayo leh" sare
4) Isticmaalka xirmooyinka xaashida birta ah laguma xaddidi karo xaaladaha cimilada.
5) Dhismuhu waxa uu leeyahay saamayn muuqata oo ilaalinta deegaanka, taas oo aad u yaraynaysa cadadka ciidda la qaato iyo xadiga shubka ah ee la isticmaalo, si hufana u ilaaliya khayraadka dhulka.
6) Ilaalinta cagaaran iyo deegaanka.
7) In ka badan oo diyaar ah: Xaraashyada xaashida qabow-samaysan waxaa lagu soo saaraa tiro ka badan xashiishyada xaashida kulul, kordhinta tirada taariikhda duubista ee laga dooranayo.Waqtiga wax soo saarka caadiga ah waa 2 toddobaad.
8) Kharash wax ku ool ah: Tusmada xaashida Qabow-samaysan waxay qiyaastii 30-40% ka qaalisan tahay in la soo saaro marka loo eego xaashida kulul ee duuban.
9) Gaadiidku waa ka jaban yahay: Tirada badan ee warshadeeyayaasha xashiishyada qaboojiya ee samaysmay awgeed, waxaa jirta fursad sare oo aad ka heli karto warshad ku taal meel u dhow marka loo eego haddii aad iibsan lahayd tuulmada xaashida kulul.Intaa waxaa dheer, xulashada weyn ee xirmooyinka xaashida qabow-sameeyay waxay kuu oggolaan kartaa inaad hesho qaybo leh cutubka modules-ka ee u dhow naqshadahaaga iyada oo aan miisaankeedu kordho.
10) Debecsanaan badan oo meelaynta: Qufulka xaashida qaboojiya-samaysan waxay u oggolaanaysaa wareeg 25-degree ah, halkii wareegta 7-ilaa-10-degree ee lagu oggolaado raso xaashida duuban oo kulul iyadoo la isticmaalayo xirmooyinka kubbadda-iyo-socket-ka.
Tusmada xaashida birta sameysan ee qaboojiyaha ayaa si weyn loogu isticmaalaa mashruuca fatahaadaha, mashruuca dhismaha, dhismaha biyaha badda iyo wixii la mid ah.